चुनावमा भोट हाल्न पाउनुभएन? माइसंसारमा भर्चुअल मतदान गर्नुस् – MySansar
चुनावमा भोट हाल्न पाउनुभएन? माइसंसारमा भर्चुअल मतदान गर्नुस्
Posted on December 7, 2017 December 7, 2017 by Salokya
माइसंसारमा पछिल्ला दुई संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीले भर्चुअल मतदानको व्यवस्था गरेका थियौँ। यसले मतको ट्रेन्ड कस्तो हुन सक्ला भनेर बुझ्न सघाएको थियो। यस पटकको चुनाव भने फरक छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी तीन वटा मतपत्रमा चार वटा मत दिनुपर्छ। यी मतबाट प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारसमेत बन्नेछ। माइसंसारका पाठकहरुले यस पटक पनि भर्चुअल मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए अनुसार यो व्यवस्था गरेका छौँ तर एउटामात्र मतपत्र राखेर मन परेको दलको चुनाव चिह्नमा भोट दिन सकिनेछ। पहिलो चरणको चुनाव हुँदा मंसिर १० गते पनि मतदान खुला गरिएको थियो तर निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई ध्यानमा राखी नतिजा सार्वजनिक गरिएको थिएन।
मोबाइलमा हुनुहुन्छ र माथि भोट गर्ने ठाउँ देखिएन भने यहाँ क्लिक गर्नुस्।
माइसंसारको भर्चुअल मतदान नेपालमा मतदान हुने दिन मंसिर १० र २१ गते खुला गरिनेछ। तर निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मतदान जारी रहँदासम्म अर्थात् मंसिर २१ को साँझ ५ बजेसम्म मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी नतिजा प्रकाशित गरिने छैन। नतिजा नेपालमा मतदानको अवधि सकिएपछि अर्थात् मंसिर २१ गते साँझ ५ बजिसकेपछिमात्रै सार्वजनिक गरिनेछ।
5 thoughts on “चुनावमा भोट हाल्न पाउनुभएन? माइसंसारमा भर्चुअल मतदान गर्नुस्”
Yesko Result aaj5baje din sakinchh ki ?
आयुष पौड्याल says:
Thanks for polling oppertunity
Lam Bdr Gorkhali says:
बहुमतको सरकार र स्थिरसरकारको लागी।